January 2018 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Thiha Htike at 11:19:00 PM 0
တစ်နှစ်ခပ်စွန်းစွန်းလောက် ခွဲသွားတဲ့ သီဟထိုက်လေ။ ကျွန်တော် အခုပြန်လာပါပြီ။ ကျွန်တော့်ရိုးရာက
ဘယ်လောက်ပဲအချိူ့က ပရဟိတ နည်းပညာ Blogger ကနေ စီးပွားရေး နည်းပညာ Blogger တွေဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်တော်ကတော့ မူလလက်ဟောင်း ခေတ်ပြောင်းသော်ကား ကျွူနုပ်မပြောင်း ဆိုသလိုပဲ ကျွန်တော်က
တော့အရင်အတိုင်းပါပဲ ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ကျွန်တော်တင်ပေးတာက မရှိသေးတဲ့သူတွေ ရှိရဲ့သားနဲ့
လိုတာလေးဖြည့်ဖို့သူတွေဖို့အတွက်ပါပဲ။တစ်ယောက်ပဲလား ရတယ် တစ်ယောက်ပဲ။ ကိုယ်မလိုရင် မပြောနဲ့
သူများလိုတာ ဖြည့်သွား ကောင်းပြီနော်။ ခုချိန် ကနေစပြီး သီဟထိုက် နည်းပညာဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်တင်ပါတော့
လိုရင်း။ ။ Mobile Driver ပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ နည်းပညာတွေ အသစ်တွေ ပေါ်နေပါစေ။မပြောင်းလဲပဲ
မူလအတိုင်း ရှိနေရတာက Driver ပါ။စာလုံးက ၆လုံးပေမယ့် သူလုပ်ပေးတာက ၆မျိုးမကသော Program
ကတော့ Driver ရှိမှ အဆင်ပြေတာကိုး။ဒီလိုဗျာ Hardware >> Operation System >>> Application software>>> User အဲ့လို သွားတယ် အသွားအပြန်တွေသွားတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ကို လည်ပတ်ဖို့ Driver
လိုတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို ချိတ်ဖို့အတွက် Driver လိုတယ်။အဲ့လိုပဲ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်
ကြိုးလိုတယ်။ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ရင် ကွန်ပြူတာ တန်းမသိဘူး။ကြိုးကို ဓါးနဲ့ခွဲကြည့်လိုက် အဲ့ထဲမှာ ကြိူးအသေး
လေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။အဲ့အသေးလေးတွေ က Chargin ဆို Chargin ကြိုး(အားသွင်းဖို့အတွက်)
Data ဆို Data ကြိုး (အချက်အလက်တွေ ပေးဖို့သယ်ယူဖို့) အဲ့လိုလေးတွေလေ။အဲ့လိုအချက်အလက်သယ်ဖို့
ကွန်ပြူတာမှာ ဖုန်းကိုသိဖို့ Software တစ်ခုထည့်ပေးရတယ် ဖုန်းဘက်ကလည်းလုပ်ပေးရတယ်။ကွန်ပြူတာ
ကထည့်တာကို Driver software လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြောမယ် Drvier ကလည်း Samsung ဆို Samsung အတွက် Oppo ဆို Oppo အတွက် ဒီလိုတွေရှိတယ်။ဒါဆို ကွန်ပြူတာ အတွင်းထည့်ပေ့းရတဲ့ Driver တွေ
အတွက်သိပြီ။ဖုန်းဘက်ကတော့ Software ထည့်ပေးထားရတာမဟုတ်ဘူး။ဖုန်းက ကွန်ပြူတာက Drvier
Software သိအောင် ဖွင့်ပေးရတယ်။ဘာလဲဖွင့်ပေးရတာက Developer Option လေ။ဟုတ်တယ် ဒါဆို
ကွန်ပြူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီ။ Driver သွင်းနည်းနှစ်မျိူးရှိတယ်။ Setup file ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွင်းတာရယ်
Device Managerကနေ သွင်းတာရယ်။ကဲအောက်မှာ တစ်မျိူးသောနည်းနဲ့သွင်းရမယ့် Setup file လေးတွေပါ။
Mobile Device တွေပေါ်သထက်ပေါ်နေတာကြောင့် အပိုင်းခွဲထားတယ်။Part 1 အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်။
ကျွန်တော့် ကို ကျေးဇူးတင်ရင်တစ်ခုပဲလုပ်ပေးပါ။ ကို ဝင်းကမ္ဘာကျော် site ကို Domain လှူပေးပါ။
Download Mobile Driver Part(1)
(မကြာခင် Online Training ဒီဆိုဒ်မှာလုပ်ပေးမယ်-မကြားဘူး ခဏပဲ)
CD/DVD တွေ Burn ဖို့အတွက် Nero ဟာ Burning Software တွေထဲမှာ လူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်.. ခုနောက်ပိုင်း ဗားရှင်းတွေမြင့်လာပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ Nero9ကို သုံးတုန်းပါပဲ.. သိပ်လည်း ထွေထွေထူးထူး သုံးစရာမရှိဘူးလေ.. စက်ထဲက Data တွေကို ခွေကူးမယ်၊ ခွေ ခွေချင်းကူးမယ် ဒီလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Nero9ဟာ ပေါ့ပါးပြီး အဆင်ပြေပါတယ်.. Nero တောင်းတဲ့သူရှိလို့ ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Nero9Essentials v9.4.12.3 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး.. ဒီအတိုင်း Run ပြီး Install လုပ်ရုံပါပဲ.. အထဲမှာ Serial လည်းတစ်ပါတည်း ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်.. .Net Frame 3.0 တော့ မရှိရင် ထည့်ထားရပါမယ်.. အင်တာနက်ချိတ်ထားရင်တော့ အလိုအလျောက် ထည့်ပေးပါတယ်.. Windows 10 ထိ Support ပေးတာမို့ အဆင်ပြေမှာပါ..
<CD/DVD တှေ Burn ဖို့အတှကျ Nero ဟာ Burning Software တှထေဲမှာ လူသုံးအမြားဆုံးဖွဈပါတယျ.. ခုနောကျပိုငျး ဗားရှငျးတှမွေငျ့လာပမေယျ့ ကြှနျတျောကတော့ Nero9ကို သုံးတုနျးပါပဲ.. သိပျလညျး ထှထှေထေူးထူး သုံးစရာမရှိဘူးလေ.. စကျထဲက Data တှကေို ခှကေူးမယျ၊ ခှေ ခှခေငျြးကူးမယျ ဒီလောကျပဲသုံးမယျဆိုရငျတော့ Nero9ဟာ ပေါ့ပါးပွီး အဆငျပွပေါတယျ.. Nero တောငျးတဲ့သူရှိလို့ ကြှနျတျောသုံးနတေဲ့ Nero9Essentials v9.4.12.3 ကိုတငျပေးလိုကျပါတယျ.. ဘာမှလုပျစရာမလိုပါဘူး.. ဒီအတိုငျး Run ပွီး Install လုပျရုံပါပဲ.. အထဲမှာ Serial လညျးတဈပါတညျး ဖွညျ့ပွီးသားဖွဈပါတယျ.. .Net Frame 3.0 တော့ မရှိရငျ ထညျ့ထားရပါမယျ.. အငျတာနကျခြိတျထားရငျတော့ အလိုအလြောကျ ထညျ့ပေးပါတယျ.. Windows 10 ထိ Support ပေးတာမို့ အဆငျပွမှောပါ..>
Nero9StartSmart Features
Data Burning on CD/DVD
Rip & Burn, Create, Edit options are only available in Upgrade. If you only want to burn CD and DVDs, then Nero9Free is best available software tool for you. Even though the Nero9specification page only suggests supported operating system as Windows XP, Vista and Windows 7, but it still works flawlessly on Windows 8.1 as well as Windows 10.
Download Nero 9.4.12.3.exe : 54.53 MB
5 မိနစ်အတွင်း 48% ထိ အမြန်အားသွင်းစနစ်ကို MWC တွင် Huawei ပြသဖွယ်ရှိ
Maung Pauk at 8:44:00 PM 0
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာဖြစ်လုပ်တဲ့ ၅၆ကြိမ်မြောက် ဘက်ထရီဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ခုမှာ ဘက်ထရီအမြန်အားသွင်းနည်းပညာသစ်တစ်ခုကို Huawei ရဲ့ Watt Lab က နမူနာပြသခဲ့ဖူးပါတယ်..
အဲဒီ နည်းပညာသစ်ကတော့ lithium-ion ဘက်ထရီတစ်လုံးကို ၅ မိနစ်အတွင်း ၅၀% ရောက်အောင် သွင်းနိုင်တဲ့စနစ်ပါ..
နမူနာဗွီဒီယိုတစ်ခုမှာ 3000mAh ဘက်ထရီတစ်လုံးကိုဖြုတ်ပြီး အားသွင်းခွက်နဲ့ ၅ မိနစ်အားသွင်းပြခဲ့ရာမှာ ၄၈% အားပြည့်နေတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်..
မနေ့က Youtube ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ Huawei ရဲ့ ကြော်ငြာဗွီဒီယိုတစ်ခုမှာ အဲဒီစနစ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ..
ဒီဗွီဒီယိုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနောက် ဝေဖန်သူတွေက Huawei ဟာ အမြန်အားသွင်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုကို စပိန်နိုင်ငံ၊ ဘာစီလိုနာမြို့မှာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ ကနေ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာ့ မိုဘ Mobile World Congress (MWC) မှာ တရားဝင် ထုတ်ဖေါ်ပြသဖွယ်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်..
အချိန် ၂ နှစ်ကြာ ပြင်ဆင်တီထွင်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက် Huawei ရဲ့ အမြန်အားသွင်းနည်းပညာဟာ တော်သင့်တဲ့ အဆင်ပြေမှုတွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကို သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိဘူး လို့လည်း ပြေကြပါတယ်..
Huawei ရဲ့ အမြန်အားသွင်းစနစ်ဟာ physical ပိုင်းရော၊ Chemical ပိုင်းမှာပါ lithium-ron အားသိုလှောင်မှုစနစ်ကို အမြန်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ mulecular structure ဖြစ်တယ်လို့ Huawei က ပြောပါတယ်..
ဒီလို အမြန်အားသွင်းလိုက်လို့ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ဘာမှထိခိုက်စရာမရှိဘူးလို့လည်း Huawei က ရှင်းပြထားပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ပြဿနာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းထဲကနေ တိုက်ရိုက်အမြန်အားသွင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘဲ သီးခြား Charger တစ်ခုနဲ့ သွင်းရမှာပါ.. ဘက်ထရီအသေတပ်ဆင်ထားတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်တော့ ဒါဟာ အဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး..
Huwei ဟာ Charger ကို ဒီထက်သေးအောင်လုပ်ပြီး ဖုန်းဘက်ထရီကို ဖြုတ်စရာမလိုတဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ ပွဲထုတ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါကြောင်း...
၂၀၁၅ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလမှာဖွဈလုပျတဲ့ ၅၆ကွိမျမွောကျ ဘကျထရီဆိုငျရာ စာတမျးဖတျပှဲတဈခုမှာ ဘကျထရီအမွနျအားသှငျးနညျးပညာသဈတဈခုကို Huawei ရဲ့ Watt Lab က နမူနာပွသခဲ့ဖူးပါတယျ..
အဲဒီ နညျးပညာသဈကတော့ lithium-ion ဘကျထရီတဈလုံးကို ၅ မိနဈအတှငျး ၅၀% ရောကျအောငျ သှငျးနိုငျတဲ့စနဈပါ..
နမူနာဗှီဒီယိုတဈခုမှာ 3000mAh ဘကျထရီတဈလုံးကိုဖွုတျပွီး အားသှငျးခှကျနဲ့ ၅ မိနဈအားသှငျးပွခဲ့ရာမှာ ၄၈% အားပွညျ့နတောကို မွငျတှခေဲ့ရပါတယျ..
မနကေ့ Youtube ပျေါမှာတငျလိုကျတဲ့ Huawei ရဲ့ ကွျောငွာဗှီဒီယိုတဈခုမှာ အဲဒီစနဈကို မွငျတှခေဲ့ကွတာပါ..
ဒီဗှီဒီယိုကိုမွငျတှခေဲ့ရပွီးနောကျ ဝဖေနျသူတှကေ Huawei ဟာ အမွနျအားသှငျးနိုငျတဲ့ နညျးပညာတဈခုကို စပိနျနိုငျငံ၊ ဘာစီလိုနာမွို့မှာ ဖဖေျေါဝါရီ ၂၆ ကနေ မတျလ ၁ ရကျနထေိ့ ကငျြးပမယျ့ ကမ်ဘာ့ မိုဘ Mobile World Congress (MWC) မှာ တရားဝငျ ထုတျဖျေါပွသဖှယျရှိတယျလို့ ခနျ့မှနျးကွပါတယျ..
အခြိနျ ၂ နှဈကွာ ပွငျဆငျတီထှငျမှုတှလေုပျပွီးတဲ့နောကျ Huawei ရဲ့ အမွနျအားသှငျးနညျးပညာဟာ တျောသငျ့တဲ့ အဆငျပွမှေုတှရှေိနနေိုငျတယျဆိုတာကို သံသယဖွဈဖှယျမရှိဘူး လို့လညျး ပွကွေပါတယျ..
Huawei ရဲ့ အမွနျအားသှငျးစနဈဟာ physical ပိုငျးရော၊ Chemical ပိုငျးမှာပါ lithium-ron အားသိုလှောငျမှုစနဈကို အမွနျဖွညျ့ဆညျးပေးတဲ့ mulecular structure ဖွဈတယျလို့ Huawei က ပွောပါတယျ..
ဒီလို အမွနျအားသှငျးလိုကျလို့ ဘကျထရီသကျတမျးကို ဘာမှထိခိုကျစရာမရှိဘူးလို့လညျး Huawei က ရှငျးပွထားပါတယျ..
ဒါပမေယျ့ ပွဿနာတဈခုက ကြှနျတျောတို့ ဖုနျးထဲကနေ တိုကျရိုကျအမွနျအားသှငျးလို့ရမှာမဟုတျဘဲ သီးခွား Charger တဈခုနဲ့ သှငျးရမှာပါ.. ဘကျထရီအသတေပျဆငျထားတဲ့ဖုနျးတှအေတှကျတော့ ဒါဟာ အဆငျပွမေယျ့ နညျးလမျးမဟုတျပါဘူး..
Huwei ဟာ Charger ကို ဒီထကျသေးအောငျလုပျပွီး ဖုနျးဘကျထရီကို ဖွုတျစရာမလိုတဲ့ နညျးစနဈနဲ့ ပှဲထုတျလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့မိပါကွောငျး...
Ref : GizMo
Maung Pauk at 11:09:00 PM 0
ညစ်ညမ်းပုံတွေကိုကြော်ငြာထည့်ထားတဲ့ ဂိမ်းပေါင်း ၆၀ ကို Play Store ကနေ Google ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်..
ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တဖောက်ပြားမှုကို ဦးတည်စေတဲ့ ညစ်ညမ်းကြော်ငြာတွေကို ကြားညှပ်ထည့်ထားတဲ့ Game Application တွေကို Check Point Research လုံခြုံရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးနောက် အခုလိုဖျက်ပစ်လိုက်တာပါ..
ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ အချို့ Game တွေထဲက Disney Pixar ရဲ့ character ကိုအခြေခံထားတဲ့ Five Nights Survival Craft နဲ့ McQueen Car Racing Game လို ဂိမ်းမျိုးဆို Download လုပ်ထားတဲ့ပမာဏ ၁ သန်းကျော်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်..
ခုလိုတွေ့ရှိရတဲ့ App ကို Adult Swine လို့ အမည်ပေးထားပြီး အဲဒီ app တွေဟာ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေပါတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါဖေါ်ပြတယ်၊ ပြီးတော့ လုံခြုံရေး ဆော့ဖ်ဝဲအတုကို Install လုပ်ခိုင်းတယ်.. ပြီးရင် User တွေကို Premium Service တွေမှာ Sing up လုပ်ခိုင်းပြီး အသုံးပြုသူတွေဆီက အခကြေးငွေ တောင်းခံတယ် လို့ Chech Point အဖွဲ့က ပြောပါတယ်..
Google ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက " ကျွန်တော်တို့ ဒီ Application တွေကို Play Store ကနေ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီ.. ပြီးရင် အဲဒီ App တွေကိုတင်တဲ့ Developer Account တွေကိုလည်း အပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်.. နောက်ပိုင်းမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း App တွေကို Install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ခုထက်ပိုပြီး လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွေကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာပါ..
User တွေရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကူအညီအများကြီးပေးတဲ့ Check Point အဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် " လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်..
ဒီလို Melicious Code တွေပါတဲ့ App ကို ကိုယ့်ဖုန်းမှာ Install လုပ်မိပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံး Uninstall လုပ်ပစ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး Google Play Store ရဲ့ အဲဒီ App အောက်မှာ " ဒီ App မှာ ညစ်ညမ်းပုံတွေပါတယ်၊ ကလေးတွေရဲ့ ဖုန်းမှာ ဒီ App သွင်းထားလား စစ်ပြီး ချက်ချင်းဖျက်ပစ်ပါ" စတဲ့ သတိပေးမှတ်ချက်တွေကို ရေးသားပေးပါ လို့လည်း အကြံပြုထားပါတယ်..
အချို့ App တွေက " သင့်ဖုန်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်နေပြီ.. အောက်ကလင့်ကိုနှိပ်ပြီး လုံခြုံရေး Software ကို Install လုပ်ပြီး ရှင်းပစ်ပါ " စတဲ့ Virus Cleaner အတုတွေကို Install လုပ်ဖို့ မြှူဆွယ်တတ်ပါတယ်၊ အချို့က ကံစမ်းမဲပေါက်တဲ့အတွက် သင့်ဖုန်းနံပတ်ကိုဖြည့်ပါ ဆိုပြီး မြှူဆွယ်တတ်ပါတယ်.. ဒါတွေမြင်နေရပြီဆိုရင် Melicious Code တွေပါဝင်တဲ့ App တစ်ခုခု Install လုပ်ထားမိပြီဆိုတာ သတိထားပြီး အမြန်ဆုံး ဖျက်ပစ်ဖို့လိုပါမယ်...
ညဈညမျးပုံတှကေိုကွျောငွာထညျ့ထားတဲ့ ဂိမျးပေါငျး ၆၀ ကို Play Store ကနေ Google ဖကျြပဈလိုကျပါတယျ..
ကလေးသူငယျတှရေဲ့ အကငျြ့စာရိတ်တဖောကျပွားမှုကို ဦးတညျစတေဲ့ ညဈညမျးကွျောငွာတှကေို ကွားညှပျထညျ့ထားတဲ့ Game Application တှကေို Check Point Research လုံခွုံရေးအဖှဲ့က စဈဆေးတှရှေိ့ပွီးနောကျ အခုလိုဖကျြပဈလိုကျတာပါ..
ဖကျြပဈလိုကျတဲ့ အခြို့ Game တှထေဲက Disney Pixar ရဲ့ character ကိုအခွခေံထားတဲ့ Five Nights Survival Craft နဲ့ McQueen Car Racing Game လို ဂိမျးမြိုးဆို Download လုပျထားတဲ့ပမာဏ ၁ သနျးကြျောနပွေီလို့ဆိုပါတယျ..
ခုလိုတှရှေိ့ရတဲ့ App ကို Adult Swine လို့ အမညျပေးထားပွီး အဲဒီ app တှဟော ညဈညမျးရုပျပုံတှပေါတဲ့ ကွျောငွာတှကေို ထပျခါထပျခါဖျေါပွတယျ၊ ပွီးတော့ လုံခွုံရေး ဆော့ဖျဝဲအတုကို Install လုပျခိုငျးတယျ.. ပွီးရငျ User တှကေို Premium Service တှမှော Sing up လုပျခိုငျးပွီး အသုံးပွုသူတှဆေီက အခကွေးငှေ တောငျးခံတယျ လို့ Chech Point အဖှဲ့က ပွောပါတယျ..
Google ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးက " ကြှနျတျောတို့ ဒီ Application တှကေို Play Store ကနေ ဖကျြပဈလိုကျပါပွီ.. ပွီးရငျ အဲဒီ App တှကေိုတငျတဲ့ Developer Account တှကေိုလညျး အပွီးဖကျြပဈလိုကျပါတယျ.. နောကျပိုငျးမှာ လူတိုငျးလူတိုငျး App တှကေို Install လုပျတော့မယျဆိုရငျ ခုထကျပိုပွီး လုံခွုံရေးသတိပေးခကျြတှကေို ထုတျပွနျပေးသှားမှာပါ..
User တှရေဲ့ လုံခွုံရေးနဲ့ပတျသကျပွီး အကူအညီအမြားကွီးပေးတဲ့ Check Point အဖှဲ့ရဲ့ ဆောငျရှကျခကျြတှကေိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ " လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ..
ဒီလို Melicious Code တှပေါတဲ့ App ကို ကိုယျ့ဖုနျးမှာ Install လုပျမိပွီဆိုရငျ အမွနျဆုံး Uninstall လုပျပဈဖို့လိုအပျမှာဖွဈပွီး Google Play Store ရဲ့ အဲဒီ App အောကျမှာ " ဒီ App မှာ ညဈညမျးပုံတှပေါတယျ၊ ကလေးတှရေဲ့ ဖုနျးမှာ ဒီ App သှငျးထားလား စဈပွီး ခကျြခငျြးဖကျြပဈပါ" စတဲ့ သတိပေးမှတျခကျြတှကေို ရေးသားပေးပါ လို့လညျး အကွံပွုထားပါတယျ..
အခြို့ App တှကေ " သငျ့ဖုနျးမှာ ဗိုငျးရပျဈ ဝငျနပွေီ.. အောကျကလငျ့ကိုနှိပျပွီး လုံခွုံရေး Software ကို Install လုပျပွီး ရှငျးပဈပါ " စတဲ့ Virus Cleaner အတုတှကေို Install လုပျဖို့ မွှူဆှယျတတျပါတယျ၊ အခြို့က ကံစမျးမဲပေါကျတဲ့အတှကျ သငျ့ဖုနျးနံပတျကိုဖွညျ့ပါ ဆိုပွီး မွှူဆှယျတတျပါတယျ.. ဒါတှမွေငျနရေပွီဆိုရငျ Melicious Code တှပေါဝငျတဲ့ App တဈခုခု Install လုပျထားမိပွီဆိုတာ သတိထားပွီး အမွနျဆုံး ဖကျြပဈဖို့လိုပါမယျ...
Sony က 4K OLED နည်းပညာကို Smartphone မှာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေ
Maung Pauk at 10:32:00 PM 0
Sony ဟာ နှစ်စဉ် CES ကို TV အမျိုးအစားအသစ်တွေနဲ့ ပွဲထွက်မိတ်ဆက်လေ့ရှိပေမယ့် ဒီနှစ် CES 2018 မှာတော့ထူးထူးခြားခြား နည်းပညာတွေထုတ်ဖေါ်ပြသခြင်းမရှိပါဘူး..
၂၀၁၇ တုန်းက A1 TV ကို အဆင့်မြင့် OLED နဲ့တွဲဖက်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်.. ဒီနှစ်တော့ Bravia A8 Series TV ကို 4K OLED နည်ပညာနဲ့ ပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်..
ဂျပန်နည်းပညာ ဂုရုကြီးဟာ ဒီ OLED နည်းပညာကို TV တွေမှာသာမက Smartphone တွေမှာပါ ထုတ်လုပ်တော့မယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် နည်းပညာလောကမှာ Smartphone တွေကြား OLED တွေအသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာတော့မလား ဆိုပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ပါတယ်..
ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်က Sony ဟာ Xperia XZ Premium ကို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 4K HDR သုံးပြီးထုတ်လုပ်မယ်လို့ ကျေညာခဲ့ပေမယ့် တကယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ LCD နည်းပညာကိုပဲ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်.. နည်းပညာသဘောအရ LCD နဲ့ OLED တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာ သိသိသာသာကွာခြားပါတယ်.. Sony ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ 4K OLED နည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့ Smatphone တွေထွက်ပေါ်လာလေမလားဆိုပြီး မျှော်လင့်နေစဉ်မှာပဲ Sony Display Engineer တွေရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချို့မှာ 4K OLED နည်းပညာအကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်..
Display Engineer တွေရဲ့ အလုပ်ခေါ်စာမှာ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်ရေးအတွက် OLED လုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်ဖို့ အလုပ်ခေါ်စာကိုတွေ့ရှိရပြီးနောက် 4K OLED ကို Sony Smartphone တွေမှာ အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုတာ သေချာသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်..
သို့သော်လည်း ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလမှာ ခေါ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ခေါ်စာဟာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြန်ပြင်ရေးသားခဲ့တာကိုကြည့်ရင် 4K OLED နဲ့ပတ်သက်ပြီး Sony မှာ အခက်အခဲအချို့ ဖြစ်နေပုံရပါတယ်..
အခြားဘက်မှာ နည်းပညာဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ LG, Moto, Google တွေကလည်း 4K Screen Smartphone အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်..
ဒီတော့ Sony ဟာ အခြား ပြိုင်ဘက်တွေကို အလဲထိုးပြီး 4K OLED နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ Smartphone တွေနဲ့ ဈေးကွက်ဝေစုကို ပိုမိုရရှိဖို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကြိုးစားနေနိုင်ပါတယ်..
ဒီတော့ Sony ရဲ့ အသစ်ထွက်လာမယ့် Smartphone Model အသစ်တွေမှာ 4K OLED ကို အသုံးပြုလာနိုင်မလား၊ ဘယ်သူတွေကပဲ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 4K OLED နည်းပညာသုံး Smartphone ကို ထုတ်လုပ်လာနိုင်မလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရအုံးမှာပေါ့..
Sony ဟာ နှဈစဉျ CES ကို TV အမြိုးအစားအသဈတှနေဲ့ ပှဲထှကျမိတျဆကျလရှေိ့ပမေယျ့ ဒီနှဈ CES 2018 မှာတော့ထူးထူးခွားခွား နညျးပညာတှထေုတျဖျေါပွသခွငျးမရှိပါဘူး..
၂၀၁၇ တုနျးက A1 TV ကို အဆငျ့မွငျ့ OLED နဲ့တှဲဖကျပွီး ထုတျလုပျခဲ့တယျ.. ဒီနှဈတော့ Bravia A8 Series TV ကို 4K OLED နညျပညာနဲ့ ပှဲထုတျလာခဲ့ပါတယျ..
ဂပြနျနညျးပညာ ဂုရုကွီးဟာ ဒီ OLED နညျးပညာကို TV တှမှောသာမက Smartphone တှမှောပါ ထုတျလုပျတော့မယျလို့ သတငျးထှကျပျေါလာပွီးနောကျ နညျးပညာလောကမှာ Smartphone တှကွေား OLED တှအေသုံးပွုမှုတှငျကယျြလာတော့မလား ဆိုပွီး လှုပျလှုပျရှားရှားဖွဈကုနျပါတယျ..
ကုနျခဲ့တဲ့နှဈက Sony ဟာ Xperia XZ Premium ကို ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး 4K HDR သုံးပွီးထုတျလုပျမယျလို့ ကညြောခဲ့ပမေယျ့ တကယျထှကျလာတဲ့အခါကတြော့ LCD နညျးပညာကိုပဲ အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ.. နညျးပညာသဘောအရ LCD နဲ့ OLED တှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှဟော သိသိသာသာကှာခွားပါတယျ.. Sony ရဲ့ ပရိတျသတျတှအေနနေဲ့ 4K OLED နညျးပညာအသုံးပွုထားတဲ့ Smatphone တှထှေကျပျေါလာလမေလားဆိုပွီး မြှျောလငျ့နစေဉျမှာပဲ Sony Display Engineer တှရေဲ့ လုပျငနျးစဉျနဲ့ပတျသကျတဲ့ သတငျးအခြို့မှာ 4K OLED နညျးပညာအကွောငျး ဖျေါပွခဲ့ကွပါတယျ..
Display Engineer တှရေဲ့ အလုပျချေါစာမှာ စမတျဖုနျးထုတျလုပျရေးအတှကျ OLED လုပျငနျးမှာလုပျကိုငျဖို့ အလုပျချေါစာကိုတှရှေိ့ရပွီးနောကျ 4K OLED ကို Sony Smartphone တှမှော အသုံးပွုတော့မယျဆိုတာ သခြောသလောကျဖွဈနပေါတယျ..
သို့သျောလညျး ၂၀၁၇ နိုဝငျဘာလမှာ ချေါခဲ့တဲ့ အလုပျချေါစာဟာ ၂၀၁၈ ဇနျနဝါရီလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာ ပွနျပွငျရေးသားခဲ့တာကိုကွညျ့ရငျ 4K OLED နဲ့ပတျသကျပွီး Sony မှာ အခကျအခဲအခြို့ ဖွဈနပေုံရပါတယျ..
အခွားဘကျမှာ နညျးပညာဆရာကွီးတှဖွေဈတဲ့ LG, Moto, Google တှကေလညျး 4K Screen Smartphone အတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနတေယျလို့ သတငျးထှကျပျေါနပေါတယျ..
ဒီတော့ Sony ဟာ အခွား ပွိုငျဘကျတှကေို အလဲထိုးပွီး 4K OLED နညျးပညာကို အသုံးပွုထားတဲ့ Smartphone တှနေဲ့ စြေးကှကျဝစေုကို ပိုမိုရရှိဖို့ မွနျမွနျဆနျဆနျ ကွိုးစားနနေိုငျပါတယျ..
ဒီတော့ Sony ရဲ့ အသဈထှကျလာမယျ့ Smartphone Model အသဈတှမှော 4K OLED ကို အသုံးပွုလာနိုငျမလား၊ ဘယျသူတှကေပဲ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး 4K OLED နညျးပညာသုံး Smartphone ကို ထုတျလုပျလာနိုငျမလဲဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရအုံးမှာပေါ့..
Maung Pauk at 10:04:00 PM 0
တရုတ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ Huawei နဲ့ ZTE တို့ ဟာ အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ဟာ ဒီတရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို အစိုးရရုံးတွေမှာ မသုံးဖို့ ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခု အဆိုပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရ ဆက်သွယ်ရေးကာကွယ်ဟန့် တားမှု အက်ဥပဒေအမှတ် H.R.4747 ဆိုတဲ့ ဒီမူကြမ်းမှာတော့ Huawei နဲ့ ZTE တို့ လို ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများဟာ အစိုးရပေါ်လွှမ်းမိုးဖို့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုပြီး ထောက်လှမ်းမှတ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်အားကြီးသထက် ကြီးလာနေတဲ့ တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စိမ့်ဝင်မှုပေါ် တုန့် ပြန်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမူကြမ်းမှာတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အမေရိကန်အစိုးရ တရုတ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ ရဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ကိုးကားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က Huawei နဲ့ တစ်ခြား ကုမ္ပဏီများဟာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ သြဇာသက်ဝင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစုတွေ ဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲထားခဲ့တာပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်က CIA နဲ့ NSA အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မိုက်ကယ်ဟေဒင်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်မှာတော့ တယ်လီကွန်းကုမ္ပဏီတွေဟာ တရုတ်အစိုးရအဖွဲ့ ထံ အရေးပါတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပြန်လည် မျှဝေတာ ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်က FBI ရီပို့တစ်ခုမှာလည်း တရုတ်အစိုးရဟာ Huawei ရဲ့ နည်းပညာများကနေတစ်ဆင့် အမေရိကန်စီးပွားရေး ဆက်သွယ်မှုများရယူနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကလည်း တရုတ်နည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ ZTE Corporation ဟာ အမေရိကန်မှ တားမြစ်ထားတဲ့ အီရင်နိုင်ငံသို့ နည်းပညာထုတ်ကုန်များ တိတ်တဆိတ်ရောင်းချမှုကြောင့် ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ ခန့်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ဖို့ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များမှ အမိန့် ချခဲ့ပါတယ်။ ထိုစဉ်က ZTE ဟာ အီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။Huawei ကတော့ ယခုနှစ်ထဲမှာ အမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲ စမတ်ဖုန်းများ ရောင်းချနိုင်ဖို့ AT&T နဲ့ညှိခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ အငြင်းပယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ Huawei အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ CES2013 နည်းပညာပြပွဲကတည်းက အမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲ ဝင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတျစမတျဖုနျးကုမ်ပဏီ Huawei နဲ့ ZTE တို့ ဟာ အမရေိကနျစြေးကှကျမှာ ခကျခဲတဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ရငျဆိုငျနရေခြိနျမှာ အမရေိကနျကှနျဂရကျလှတျတျောဟာ ဒီတရုတျနညျးပညာကုမ်ပဏီနှဈခုရဲ့ ထုတျကုနျတှကေို အစိုးရရုံးတှမှော မသုံးဖို့ ဥပဒမေူကွမျးတဈခု အဆိုပွုလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျအစိုးရ ဆကျသှယျရေးကာကှယျဟနျ့ တားမှု အကျဥပဒအေမှတျ H.R.4747 ဆိုတဲ့ ဒီမူကွမျးမှာတော့ Huawei နဲ့ ZTE တို့ လို ပွငျပဆကျသှယျရေးကုမ်ပဏီမြားဟာ အစိုးရပျေါလှမျးမိုးဖို့အကွောငျးရှိတယျဆိုပွီး ထောကျလှမျးမှတျတမျးတှမှော ဖျောပွထားတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒါဟာ အမရေိကနျနိုငျငံ့လုံခွုံရေးဆိုငျရာ စိုးရိမျခကျြတဈခုဖွဈပွီး အငျအားကွီးသထကျ ကွီးလာနတေဲ့ တရုတျနညျးပညာကုမ်ပဏီတှရေဲ့ စိမျ့ဝငျမှုပျေါ တုနျ့ ပွနျခကျြလညျး ဖွဈပါတယျ။ ယခုမူကွမျးမှာတော့ ၂၀၁၁ ခုနှဈက အမရေိကနျအစိုးရ တရုတျကျောမရှငျအဖှဲ့ ရဲ့ အစီရငျခံစာတဈစောငျကို ကိုးကားဖျောပွထားတာဖွဈပွီး ထိုစဉျက Huawei နဲ့ တဈခွား ကုမ်ပဏီမြားဟာ တရုတျအစိုးရရဲ့ သွဇာသကျဝငျနတေဲ့ လုပျငနျးစုတှေ ဖွဈတယျလို့ စှပျစှဲထားခဲ့တာပါ။
၂၀၁၃ ခုနှဈက CIA နဲ့ NSA အကွီးအကဲ ဖွဈသူ ဗိုလျခြုပျမိုကျကယျဟဒေငျရဲ့ ထုတျပွနျခကျြတဈစောငျမှာတော့ တယျလီကှနျးကုမ်ပဏီတှဟော တရုတျအစိုးရအဖှဲ့ ထံ အရေးပါတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ ပွနျလညျ မြှဝတော ရှိတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ၂၀၁၅ခုနှဈက FBI ရီပို့တဈခုမှာလညျး တရုတျအစိုးရဟာ Huawei ရဲ့ နညျးပညာမြားကနတေဈဆငျ့ အမရေိကနျစီးပှားရေး ဆကျသှယျမှုမြားရယူနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈကလညျး တရုတျနညျးပညာလုပျငနျးစုကွီးဖွဈတဲ့ ZTE Corporation ဟာ အမရေိကနျမှ တားမွဈထားတဲ့ အီရငျနိုငျငံသို့ နညျးပညာထုတျကုနျမြား တိတျတဆိတျရောငျးခမြှုကွောငျ့ ဒျေါလာ သနျး ၉၀၀ ခနျ့ဒဏျငှပေေးဆောငျဖို့ အမရေိကနျအာဏာပိုငျမြားမှ အမိနျ့ ခခြဲ့ပါတယျ။ ထိုစဉျက ZTE ဟာ အီရနျနိုငျငံနဲ့ဆယျနှဈကြျောကွာ အရောငျးအဝယျလုပျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။Huawei ကတော့ ယခုနှဈထဲမှာ အမရေိကနျစြေးကှကျထဲ စမတျဖုနျးမြား ရောငျးခနြိုငျဖို့ AT&T နဲ့ညှိခဲ့ပမေယျ့ နောကျဆုံးမှာ အငွငျးပယျခံခဲ့ရတာပါ။ Huawei အနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ CES2013 နညျးပညာပွပှဲကတညျးက အမရေိကနျစြေးကှကျထဲ ဝငျဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Credit : Duwun Tech
Maung Pauk at 9:27:00 PM 0
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း CES မှာ ကုမ္ပဏီအသီးသီးက ထုတ်လုပ်တဲ့ Laptop, TV, စက်ရုပ်၊ အသေးစား ကိရိယာဆန်းဆန်းပြားပြားတွေနဲ့ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေကို ထုတ်ဖေါ်ပြသလေ့ရှိကြပါတယ်.. ဒီနှစ် CES မှာ SanDisk က 1TB (1000GB) ထိ သိမ်းဆည်းနိုင်မယ့် Flash Drive တစ်ခုကို ထုတ်ဖေါ်ပြသလိုက်ပါတယ်..
Flash Drive ဆိုတာ တကယ့်ကိုငယ်ရွယ်ပြီး Data သိုလှောင်မှု ပမာဏ သိပ်များများ ထုတ်လေ့မရှိကြပါဘူး.. 2TB ပမာဏ သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ Kingston’s DataTraveler Ultimate GT ကို Kingston က 2017 မှာထထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အခု ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ SanDisk ရဲ့ 1TB Flash Drive လို သေးသေးလေးမဟုတ်ပါဘူး.. အရွယ်အစား ပိုကြီးပြီး USB ကလည်း 3.0 သာရှိပါတယ်..
SanDisk က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 1TB USB-C Flash Drive ကတော့ သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ ပမာဏများသလို မြန်ဆန်တဲ့ Data တွေကို Transfer လုပ်နိုင်ဖို့ နောက်ဆုံးပေါ် USB Type C ကို သုံးထားပါတယ်.. USB Type C အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ Smartphone တွေ၊ Tablet တွေ၊ TV တွေနဲ့ တွဲဖက်သုံးစွဲနိုင်မှာပါ..
CES ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့မှာ ထုတ်ဖေါ်ပြသလိုက်တဲ့ SanDisk ရဲ့ 1TB USB-C Flash Drive ဟာ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်ခဲ့သလို ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံး 1TB USB-C Flash Drive လည်း ဖြစ်လာဖွယ်ရှိပါတယ်... ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ဒေါ်လာ 350 လောက်ရှိမယ့် ဒီ 1TB USB-C Flash Drive လေးဟာ ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ဖို့တော့ နည်းနည်း နောက်ကျနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်..
နှဈစဉျနှဈတိုငျး CES မှာ ကုမ်ပဏီအသီးသီးက ထုတျလုပျတဲ့ Laptop, TV, စကျရုပျ၊ အသေးစား ကိရိယာဆနျးဆနျးပွားပွားတှနေဲ့ နညျးပညာအသဈအဆနျးတှကေို ထုတျဖျေါပွသလရှေိ့ကွပါတယျ.. ဒီနှဈ CES မှာ SanDisk က 1TB (1000GB) ထိ သိမျးဆညျးနိုငျမယျ့ Flash Drive တဈခုကို ထုတျဖျေါပွသလိုကျပါတယျ..
Flash Drive ဆိုတာ တကယျ့ကိုငယျရှယျပွီး Data သိုလှောငျမှု ပမာဏ သိပျမြားမြား ထုတျလမေ့ရှိကွပါဘူး.. 2TB ပမာဏ သိမျးဆညျးနိုငျတဲ့ Kingston’s DataTraveler Ultimate GT ကို Kingston က 2017 မှာထထုတျလုပျခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ အခု ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ SanDisk ရဲ့ 1TB Flash Drive လို သေးသေးလေးမဟုတျပါဘူး.. အရှယျအစား ပိုကွီးပွီး USB ကလညျး 3.0 သာရှိပါတယျ..
SanDisk က ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ 1TB USB-C Flash Drive ကတော့ သိမျးဆညျးနိုငျတဲ့ ပမာဏမြားသလို မွနျဆနျတဲ့ Data တှကေို Transfer လုပျနိုငျဖို့ နောကျဆုံးပျေါ USB Type C ကို သုံးထားပါတယျ.. USB Type C အထောကျအပံ့ပေးတဲ့ Smartphone တှေ၊ Tablet တှေ၊ TV တှနေဲ့ တှဲဖကျသုံးစှဲနိုငျမှာပါ..
CES ရဲ့ ပထမဆုံးနမှေ့ာ ထုတျဖျေါပွသလိုကျတဲ့ SanDisk ရဲ့ 1TB USB-C Flash Drive ဟာ စိတျဝငျစားမှု မွငျ့တကျခဲ့သလို ကမ်ဘာ့ အသေးဆုံး 1TB USB-C Flash Drive လညျး ဖွဈလာဖှယျရှိပါတယျ... ခနျ့မှနျးတနျဖိုး ဒျေါလာ 350 လောကျရှိမယျ့ ဒီ 1TB USB-C Flash Drive လေးဟာ စြေးကှကျထဲကို ရောကျဖို့တော့ နညျးနညျး နောကျကနြိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးကွပါတယျ..
Ref : The Verage
Microsoft က Surface Phone ကိုဖြန့်ချိဖို့ နီးကပ်နေပြီလား
Maung Pauk at 10:43:00 PM 0
စမတ်ဖုန်းတွေအပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ခေတ်ကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့ Microsoft ကုမ္ပဏီကြီးကလည်း ကြိုးစားနေပြီထင်ပါတယ်.. Microsoft က စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်လာနိုင်သလားဆိုပြီး နည်းပညာသတင်းတွေကြားမှာ နားစွင့်ခဲ့ကြပေမယ့် Microsoft ကတော့ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်..
ဒါပေမယ့် တရုတ်အမေးအဖြေ website တစ်ခုမှာ Microsoft ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်က အဖြေပေးထားတဲ့အထဲမှာ Surface Phone နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလာတော့ Microsoft ဟာ စမတ်ဖုန်းသစ် Surface Phone ကို ဖြန့်ချိဖို့ နီးကပ်နေပြီလား ဆိုတဲ့ အတွေးဟာ နည်းပညာ လေ့လာသူကြား တော်တော် စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်.. တရုတ်အမေးအဖြေ website ထဲမှာ Microsoft ရဲ့ Windows OS မှာပါတဲ့ Cortana ဆိုတဲ့ Assistant Software ဟာ သုံးစွဲသူတွေကို အားရကျေနပ်လောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး.. အဲဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Microsoft ဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို Microsoft အင်ဂျင်နီယာက ဖြေကြားရာမှာ
"Cortana Software ကို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်.. အထူးသဖြင့် အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ Cortana ကို Microsoft ရဲ့ Surface Phone မှာ စတင်သုံးစွဲမှာဖြစ်ပြီး တကယ့်ကို လိုလေသေးမရှိ ပြည့်စုံတဲ့ Cortana ကို Surface Phone သုံးစွဲသူတွေ စတင်အရသာခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်..
Siri နဲ့ Bixby ဆိုတဲ့ အထောက်အကူပြု Software နှစ်ခုကို အရင်ထည့်မယ်.. ပြီးရင် Cortana ကို Thirt-party Application အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်.. Windows Phone သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ Cortana app ကို အသုံးပြုနိုင်ကြတော့မှာပါ.. Cortana ဟာ သုံးရ နည်းနည်းခက်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အသေအချာ ပြင်ဆင်ထားပြီး ပြည့်စုံတဲ့ Cortana ကို Windows Phone မှာရော၊ Windows PC အသုံးပြုတဲ့သူတွေပါ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်နေပါတယ်" ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်..
Microsoft အင်ဂျင်နီယာရဲ့ ပြောစကားထဲမှာ Microsoft Surface Phone အကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါ ပါဝင်နေတာကို သတိထားမိကြတဲ့ နည်းပညာလေ့လာသူတွေဟာ Microsoft Surface Phone အကြောင်း ပိုမို သိချင်လာကြပြီး အဲဒီအင်ဂျင်နီယာကို မေးခဲ့ကြပေမယ့် သူက ရယ်သွမ်းသွေးပြီး "Microsoft Surface Phone နဲ့ပတ်သက်လို့ ခုလောလောဆယ်တော့ ပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးဗျ" လိုသာ တုန့်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်..
စမတျဖုနျးတှအေပွိုငျအဆိုငျ ထုတျလုပျနတေဲ့ခတျေကို အမီလိုကျနိုငျဖို့ Microsoft ကုမ်ပဏီကွီးကလညျး ကွိုးစားနပွေီထငျပါတယျ.. Microsoft က စမတျဖုနျးထုတျလုပျလာနိုငျသလားဆိုပွီး နညျးပညာသတငျးတှကွေားမှာ နားစှငျ့ခဲ့ကွပမေယျ့ Microsoft ကတော့ နှုတျဆိတျနခေဲ့တယျ..
ဒါပမေယျ့ တရုတျအမေးအဖွေ website တဈခုမှာ Microsoft ရဲ့ အငျဂငျြနီယာတဈယောကျက အဖွပေေးထားတဲ့အထဲမှာ Surface Phone နဲ့ပတျသကျပွီး ထုတျဖျေါပွောကွားလာတော့ Microsoft ဟာ စမတျဖုနျးသဈ Surface Phone ကို ဖွနျ့ခြိဖို့ နီးကပျနပွေီလား ဆိုတဲ့ အတှေးဟာ နညျးပညာ လလေ့ာသူကွား တျောတျော စိတျဝငျစားခဲ့ကွပါတယျ.. တရုတျအမေးအဖွေ website ထဲမှာ Microsoft ရဲ့ Windows OS မှာပါတဲ့ Cortana ဆိုတဲ့ Assistant Software ဟာ သုံးစှဲသူတှကေို အားရကနြေပျလောကျအောငျ မစှမျးဆောငျနိုငျဘူး.. အဲဒီပွဿနာနဲ့ပတျသကျပွီး Microsoft ဘယျလိုဖွရှေငျးဖို့ အစီအစဉျရှိပါသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို Microsoft အငျဂငျြနီယာက ဖွကွေားရာမှာ
"Cortana Software ကို အဆငျ့မွှငျ့တငျဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ.. အထူးသဖွငျ့ အဆငျ့မွှငျ့ထားတဲ့ Cortana ကို Microsoft ရဲ့ Surface Phone မှာ စတငျသုံးစှဲမှာဖွဈပွီး တကယျ့ကို လိုလသေေးမရှိ ပွညျ့စုံတဲ့ Cortana ကို Surface Phone သုံးစှဲသူတှေ စတငျအရသာခံကွရမှာဖွဈပါတယျ..
Siri နဲ့ Bixby ဆိုတဲ့ အထောကျအကူပွု Software နှဈခုကို အရငျထညျ့မယျ.. ပွီးရငျ Cortana ကို Thirt-party Application အနနေဲ့ထညျ့ပေးလိုကျပါမယျ.. Windows Phone သုံးစှဲသူတှအေနနေဲ့ ပိုမိုပွညျ့စုံတဲ့ Cortana app ကို အသုံးပွုနိုငျကွတော့မှာပါ.. Cortana ဟာ သုံးရ နညျးနညျးခကျတယျဆိုတာ သိပါတယျ.. ဒါပမေယျ့ အသအေခြာ ပွငျဆငျထားပွီး ပွညျ့စုံတဲ့ Cortana ကို Windows Phone မှာရော၊ Windows PC အသုံးပွုတဲ့သူတှပေါ အဆငျပွပွေေ အသုံးပွုနိုငျအောငျ စီစဉျနပေါတယျ" ဆိုပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ..
Microsoft အငျဂငျြနီယာရဲ့ ပွောစကားထဲမှာ Microsoft Surface Phone အကွောငျး ထပျခါထပျခါ ပါဝငျနတောကို သတိထားမိကွတဲ့ နညျးပညာလလေ့ာသူတှဟော Microsoft Surface Phone အကွောငျး ပိုမို သိခငျြလာကွပွီး အဲဒီအငျဂငျြနီယာကို မေးခဲ့ကွပမေယျ့ သူက ရယျသှမျးသှေးပွီး "Microsoft Surface Phone နဲ့ပတျသကျလို့ ခုလောလောဆယျတော့ ပွောလို့မဖွဈသေးဘူးဗြ" လိုသာ တုနျ့ပွနျသှားခဲ့ပါတယျ..
Ref : Windows Lastest
Maung Pauk at 12:47:00 PM 0